Khilaafka Turkiga iyo Imaaraatka oo weji cusub yeeshay - BBC News Somali
Image caption Telefishin Turkiga laga leeyahay ayaa qaaday muuqaalka waddo laga bedelay astaanta.
Farriinta Twitter-ka waxay sheegeysaa in Pasham uu si xun ula dhaqmay Carabta muddadii uu maamulayay magaalada Madina, horraantii qarrnigii 20-aad, wuxuuna sheegay "in ciidammadii ninkaasi ay xiriir la leeyihiin Mr Erdogan."
Madaxweynaha Turkiga ayaa difaacay barasaabkii hore ee magaalada barakeysan ee Madina, wuxuuna su'aal geliyay jiritaanka awoowayaasha wasiirka Imaaraatka.
Ciidamo Turki ah oo Jarmalka iska dhiibay
Mr Erdogan wuxuu wasiirka u sheegay "in uu shaqadiisa garto" oo shimbirba shimbirkiisa uu la duulo. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in eeda ay tahay "aflagaado".
Madaxweynaha Turkiga ayaa dalka Imaaraatka ku tilmaamay meel ay kharibeen "lacag iyo shidaal".
"Hadda laga billaabo, cinwaanka safaaradda waa in uu si rasmi ah u muujiyaa waddada Difaacaha Madina, Fahreddin Pasha. Nasiib wacan," ayuu yiri Mustafa Tune oo Twitter-kiisa ku qoray farriintaas oo ah luqadda Turkiga.
Wasiir Turki ah oo laga hor istaagay in uu galo Austria
Erdogan iyo madaxweynaha Giriigga oo is maandhaafay
Sacuudiga iyo Imaaraatka oo canshuur soo rogay markii ugu horeysay
1 Jannaayo 2018